Emma_Steel | တစ်ဦးကရထား Save
စာရေးသူ: မင်းသမီး Emma သံမဏိ
နေအိမ် > မင်းသမီး Emma သံမဏိ
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ခရီးသွားလာရေးစည်းမျဉ်းများကို ဆက်လက်၍ အဆင်ပြေအောင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသဖြင့်ယခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ရာများကိုသင်လေ့လာရန်အခွင့်အရေးရှိသည်. အစောပိုင်းကပိတ်ခဲ့သည့်အားလပ်ရက်အပန်းဖြေနေရာများသည်ကမ္ဘာသည်ကပ်ရောဂါနှင့်အတူနေထိုင်နေရချိန်တွင်တဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာခဲ့သည်. ဤတွင်များမှာ 8 အကောင်းဆုံး…
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ တစ်ကိုယ်တော်ခရီးကိုစီစဉ်ခြင်းသည်အတွေ့အကြုံရှိခရီးသွားတစ် ဦး အတွက်ပင်ခက်ခဲနိုင်သည်, အထူးသဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ရန်မှန်ကန်သောနေရာကိုရွေးချယ်ရန်နှင့်ထိုတွင်ရှိနေစဉ်ပါ ၀ င်ရန်သင့်တော်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်သည်. ဒါပေမယ့်အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကအကောင်းဆုံးကိုလုပ်ချင်လို့ပါ…